Junior Win (ဂျူနီယာဝင်း) : Give meabreak!(Education 2)
Give meabreak!(Education 2)
ရှေးဦးစွာအေသင်မြို့သားနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ပဲရိကလိ(Pericles,429BC)၏အဆိုတစ်ခုကိုစ တင်၍ဖော်ပြပါမည်။သူက”ကျွှနိုပ်တို့၏လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်အရာရာသည်လူနည်းစုလက်ထဲတွင် မရှိဘဲလူအများ၏လက်ထဲတွင်ရှိသည်။ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ၊ပဠိပက္ခများတွင်တရားဥပဒေသည်ဘက် မလိုက်ဘဲအမှန်အတိုင်းဆုံးဖြတ်ပေးသည်။နယ်ပယ်တစ်ခုခုထဲတွင်ကျွမ်းကျင်သောမည်သူမဆိုသူ ၏အရည်အချင်းနှင့်ထိုက်တန်သောနေရာကိုရရှိသည်။ရာထူးအဆင့်ထက်အရည်အချင်းကိုဦးစား ပေးသည်။လူသားအတွက်ကောင်းကျိူးပြုနိုင်လျှင်လူတစ်ဦး၏ဆင်းရဲခြင်းသည်ထိုကဲ့သို့ကောင်း ကျိူးပြုခြင်းကိုအတားအဆီးမဖြစ်ရ”။ဤသည်ကားရှေးဂရိတို့၏လူ့အဖွဲ့အစည်း၏အခြေခံမူဝါဒ
ရှေးဂရိလူမျိူးအေသင်မြို့သာများသည်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်စည်းစည်းလုံးလုံးလုပ်ကိုင်ဆောင် ရွက်နိုင်စွမ်းရှိကြသည်။သူတို့သည်လယ်သမား၊ယာသမား၊လက်သမား၊ကုန်သည်၊စီးပွားရေးလုပ် ငန်းရှင်များစသည်ဖြင့်အဖြစ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။သို့သော်သူတို့၏ အလုပ်သည်ဤမျှလောက်တွင်ရပ်မသွားပါ။သူတို့သည်နိုင်ငံသားများအဖြစ်တာဝန်ကျေသောသူ များဖြစ်ကြသည်။နိုင်ငံအတွက်အေ၇းပါသောဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရာတွင်မဲပေးခြင်း၊ပါဝင်ဆွေး နွေးခြင်းတို့ကိုအနည်းနှင့်အများပါဝင်လုပ်ဆောင်ကြသည်။တစ်ဦးခြင်းအနေဖြင့်အနည်းမျှသာ လုပ်ဆောင်ခြင်းသည်တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာတွင်များစွာအကျူိူးသက်ရာက်သည်။လူတိုင်း သည်သူ့အသိစိတ်ဓါတ်နှင့်သူလူသားအားလုံး၏အကျိူးအတွက်ဆောင်ရွက်ရမည့်တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ကြသည်။
ဤတွင်မကသေးဘာသာရေးဆိုင်ရာရိုးရာပွဲများတွင်လည်းညီညီညွတ်ညွတ်ပါဝင်ဆင်နွဲကြသည်။ ဘာသာရေးအဆောက်အဦများနှင့်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောအဆောက်အဦများဖြစ်သည့်အား ကစားရုံ၊ဇတ်ရုံစသည်တ်ို့ကိုကြီးကျယ်ခန်းနားစွာဆောက်ုလပ်ထားပြီး၎င်းတို့သည်အားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သည်ဟူသောစိတ်ဓါတ်မျိူးရှိကြသည်။ရှေးရဂရိနိုင်ငံအေသင်မြို့၏အနုပညာနှင့်စာပေ လက်ရာများ၏အဆင့်အတန်းသည်ယခုခေတ်တွင်ပင်လျှင်ထပ်တန်းကပါဝင်နေဆဲဖြစ်သော် လည်း၎င်းတို့သည်လူနည်းစုအတွက်ဟုတ်ဘဲအားလုံးအတွက်ဖြစ်သလို၊အားလုံးက၄င်းတို့ကို နားလည်ပြီးဂုဏ်ယူကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။
ဂရိနိုင်ငံသားအားလုံးကလည်းအေသင်မြို့ပေါ်ရှိလက်တစ်ဆုတ်စာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များ၏ပညာကို လေးစားကြပြီး၎င်းတို့အတွက်မည်သည့်တာဝန်ကိုမဆိုထမ်းဆောင်ကြရန်အသင့်ရှိကြသည်။ ဤကဲ့သို့သောနိုင်ငံသားများဖြစ်လာအောင်မည်ကဲ့သို့ပညာပေးစည်းရုံးခဲ့သည်ကိုသိရှိရန်တော် တော်ခက်ပါသည်။ထိုခက်ခဲသောအရာကိုကျွန်တော်တို့သိရှိနိုင်သမျှသိရှိအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ် ပါသည်။
ယခုခေတ်တွင်လူသားများသည်ရှေးဂရိအေသင်မြို့ထက်အဖက်ဖက်တွင်ရုပ်ဝတ္ထုအားဖြင့်တိုး တက်နေပြီဖြစ်သည်။ပညာရပ်အားဖြင့်လည်ထိုခေတ်တွင်မထွန်းကားခဲ့သောဘာသာရပ်များ ထွန်းကားနေပြီဖြစ်သည်။ဘာသာရေးနယ်ပယ်တွင်လည်းများစွာတိုးတက်လိုစိတ်ရှိလျှင်တိုးတက် နိုင်ပါသည်။ဤကဲ့သို့သောအခြေအနေအောက်တွင်ကျွနိုပ်တို့သည်လည်းရှေးဂရိအေသင်တို့၏ လူ့အဖွဲ့အစည်းထက်သာသောအဖွဲ့အစည်းမျိူးဘာကြောင့်မထူထောင်နိုင်ရမည်နည်း။
ယခုခေတ်နှင့်နှိူင်းယှဉ်လျှင်ရှေးကအေသင်မြို့သားများသည်ပို၍ဆင်းရဲသည်။အသုံးချသိပ္ပံနယ် ပယ်တွင်အတော်အားနည်းသည်။မရှိသလောက်ဖြစ်သည်။စက်ရုံကြီးများတွင်လည်းပြောပ လောက်အောင်မရှိချေ။ပိုမို၍အံ့သြစရာကောင်းသည်မှာပညာရေးတွင်အခြေခံအဆင့်ထက်ပို သောစနစ်ဟူ၍မရှိ။တက္ကသိုလ်များမရှိ။အထက်တန်းကျောင်းများလည်းမရှိ။ပညာရှင်များမှာလူ နည်းစုသာဖြစ်သည်။ပညာရေးတွင်မရှိမဖြစ်သောစာမေးပွဲဟူသည်လည်းမရှိချေ။အေသင်မြို့သား တော်တော်များများသည်စာရေးစာဖတ်ပင်မတတ်ကြပါ။စာဖတ်တတ်သူများအဖို့ဖတ်စရာစာအုပ် များလည်းမရှိပါ။ပညာရှင်များရေးသားထားသောစာမူများသာရှိပါသည်။ဤကဲ့သို့သောအခြေအ နေအောက်တွင်ပညာရေးသည်လူ့ဘ၀ထဲတွင်မည်ကဲ့သို့ပါဝင်နိုင်မည်လဲ။
ယခုခေတ်တွင်ပင်ကျော်ကြားလျက်ရှိသောစာပေများကိုမည်ကဲ့သို့ဖန်တီးခဲ့သနည်း။ဖန်တီးရုံသာ မကယင်းစာပေအနုပညာလက်ရာများသည်သာမန်လူများလက်လှမ်းမှီသည့်အဆင့်ကိုဘယ်လို ရောက်သွားသနည်း။
ယခုပြောပြခဲ့သည်မှာပညာရေးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်ဟုယူဆထားသော်လည်းရှေးဂရိ အေသင်မြို့သားများတွင်မရှိသောအရာများဖြစ်သည်။ဤအရာများမရှိဘဲလျက်ရှေးဂရိလူ့အဖွဲ့ အစည်းသည်ယဉ်ကျေးမူတွင်အဘယ်ကြောင့်ကျွနိုပ်တို့အတုယူလောက်အောင်ပင်အဆင့်အ တန်းမြင့်သနည်း။
ဤမေးခွန်းကိုဖြေနိုင်ရန်အတွက်သူုတို့တွင်ရှိပြီးကျွနိုပ်တို့တွင်မရှိ၊သို့မဟုတ်အားနည်းသောအ ရာများကိုလိုက်လံ၍ရှာသောအခါထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရှိသောအချက်တစ်ခုရှိပါသည်။ရှေးဂရိ လူမျိူးတို့သည်စာမဖတ်ကြပါ။သို့သော်စကားတော့အလွန်ပြောကြပါသည်။သူတို့၏ပညာရေး သည်စာဖတ်ခြင်း၊ကျောင်းတက်ခြင်းတို့မှရရှိခြင်းမဟုတ်ဘဲဆွေးနွေးခြင်းမှရရှိခြင်ဖြစ်သည်။
ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်စိန့်ပေါ(လ)(ST Paul)သည်အေသင်မြို့သို့သွားခဲ့စဉ်ကဤ သို့မှတ်ချက်ချသည်။
Posted by Junior Win at 5:16 AM
Special Time Zone!
Give meabreak!(Education 1)